(၂၀၁၃ ခုနှစ်) ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းရဲ့ ထူးခြားချက်များ | NWT
ဖတ်လို ကန်နာဒါ ကန်ယန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကမ္ဘောဒီးယား ကာဇက် ကိုရီးယား ကိုရီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီရီဘာတီ ကီလူဘာ ကော့စတာရီကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကျူးဘား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွန်ဂို ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ခရိုအေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချက် ချက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂရိ ဂရိ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂါ ဂါနာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျမေကန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျားဗား ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွာတီမာလာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂွာရာနီ စင်္ကာပူ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား စပိန် စပိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စလိုဗက် စလိုဗက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စလိုဗေးနီးယား စီဘွာနို ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆာလ်ဗေဒိုရန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီလိုဇီ ဆွစ် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဆွီဒင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇင်ဘာဘွေ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇမ်ဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇူးလူး တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇော့ဇီလ် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တရုတ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တဟီတီ တာဂျီကီ တာတာ တာ့ခ်မန် တီဂရင်ယာ တီရှီလူဘာ တူဗာလူ တောင်အာဖရိက လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်ဝမ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ထိုင်း ထိုင်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒတ်ချ် ဒတ်ချ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နိုင်ဂျီးရီးယန်း လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား နီကာရာဂွာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နီပေါ နီအာစ် နော်ဝေ ပနားမား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပန်ချာပီ (ရောမ) ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါရာဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပိုလန် ပိုလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီရူး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပေါ်တူဂီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပြင်သစ် ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖင်လန် ဖလန်းမစ်ရှ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖိလစ်ပိုင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖီဂျီ ဗင်နီဇွဲလား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဗြိတိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘစ်လာမာ ဘယ်ဂျီယံ ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘာတက် (ကာရို) ဘာတက် (တိုဘာ) ဘိုင်ကိုးလ် ဘိုလီးဗီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မလေး မလေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာဒါဂက်စကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာယာ မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မိုဇမ်ဘစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မြန်မာ မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယူကရိန်း ယူရုဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရှိုစာ ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို လွန်ဒါ ဝါရေး‑ဝါရေး သြစတြီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား သြစတြေးလျ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟင်ဒီ ဟင်ဒီ (ရောမ) ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အက်စတိုးနီးယား အင်ဇီမာ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်းဒီးယန်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမေရိကန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အမ်ဘွန်ဒူ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဘေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အိုင်စိုကို အိုင်ယာလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီကွေဒေါ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အေမာရာ အေးဝေး ဥဇဘက် ဥဇဘက် (ရိုမန်)
ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန် ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​ကို ၁၉၅၀ ပြည့်​နှစ်​မှာ အင်္ဂလိပ်​လို ထုတ်​ဝေ​ခဲ့​ပြီး တစ်​အုပ်​လုံး​ကို​တော့ ၁၉၆၁ ခု​နှစ်​မှာ ထုတ်​ဝေ​ခဲ့​တယ်။ အဲဒီ​အချိန်​က​စ​ပြီး လူ​သန်း​ပေါင်း​များ​စွာ​ဟာ မူ​ရင်း​ဘာ​သာ​စကား​တွေ​က​နေ ပြန်ဆို​ထား​တဲ့၊ တိ​ကျ​ပြီး ဖတ်​ရ​လွယ်​ကူ​တဲ့ သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​ကို ဘာ​သာ​စကား​ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်​နဲ့ ဖတ်​ရှု​ပြီး အကျိုး​ခံစား​နေ​ကြ​တယ်။
ဒီ​နေ့​ခေတ် စာ​ဖတ်​သူ​တွေရဲ့ စိတ်​နှလုံး​ကို ထိ​မိ​စေ​တဲ့ ဘာ​သာ​စကား​ကို အသုံး​ပြု​ဖို့ လို​အပ်​မှန်း ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း​ကော်​မတီ​က သိ​လာ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ဒီ​ကျမ်း​စာ​မှာ အောက်​ပါ​အချက်​တွေ​နဲ့​အညီ ရေး​ဟန်​နဲ့ ဝေါ​ဟာ​ရ​တ​ချို့ ပြောင်း​လဲ​ပြန်​ဆို​ထား​ပါ​တယ်။
နား​လည်​ရ​လွယ်​တဲ့ ခေတ်​သုံး​စကား​ကို အသုံး​ပြု​ခြင်း။ ဟောင်း​နွမ်း​ပြီး နား​လည်​ရ​ခက်​တဲ့ အသုံး​အနှုန်း​တွေ​ကို နေ့​စဉ်​သုံး နား​လည်​လွယ်​တဲ့ စကား​တွေ​နဲ့ ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ ဥပမာ၊ မြန်​မာ​ကျမ်း​စာ​တ​ချို့​မှာ​ပါ​တဲ့ “သြတ္တပ္ပ​စိတ်” ဆို​တဲ့​စကား​လုံး​ဟာ နား​လည်​ရ​ခက်​တယ်၊ အဓိပ္ပာယ်​လည်း မမှန်​ဘူး။ ဒါ​ကြောင့် ဒီ​ကျမ်း​စာ​မှာ “အမှား​အမှန်​သိ​စိတ်” လို့​ပြန်​ဆိုလိုက်​တဲ့​အခါ အဓိပ္ပာယ်​မှန်​ပြီး နား​လည်​ရ​လွယ်​ကူ​တယ်။ (၁ ကော​ရိန္သု ၁၀:၂၅) “ဗ​တ္တိဇံ” ဆို​တဲ့ စကား​လုံး​ကို “နှစ်ခြင်း” ဆို​ပြီး ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ (မဿဲ ၃:၇) ပြီး​တော့ “မျောက်​မထား​ခြင်း၊” “မျောက်​မထား​တဲ့​မိန်း​မ” စ​တဲ့ စကား​နွမ်း​တွေ​အစား “အိမ်​ထောင်​ရေး​ဖောက်​ပြန်​ခြင်း၊” “အိမ်​ထောင်​ရေး​ဖောက်​ပြန်​တဲ့ မိန်း​မ” ဆို​ပြီး ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ (ပညာ​အလိမ္မာ ၆:၃၂။ ၃၀:၂၀) “ပတ္ထ​နာ” ဆို​တဲ့ စကား​နွမ်း​အစား​ “ဆုတောင်း” ဆို​တဲ့ ခေတ်​သုံး​စကား​လုံး​နဲ့ ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။—ဟဗက္ကုတ် ၃:၁။ လုကာ ၆:၁၂။ ရော​မ ၁၂:၁၂။
ပို​ရှင်း​လင်း​လာ​တဲ့ ကျမ်း​စာ​အသုံး​အနှုန်း​များ။ မြန်​မာ​ကျမ်း​စာ​အများ​စု​မှာ​ပါ​တဲ့ အသုံး​အနှုန်း​တ​ချို့​ဟာ အဓိပ္ပာယ်​အမှန်​ကို နား​လည်​နိုင်​ဖို့ ထပ်​ဆင့်​ရှင်း​ပြချက်​တွေ လို​အပ်​တယ်။ ဥပမာ၊ ယေရှု သေဒဏ်​စီ​ရင်​ခံ​ရ​တဲ့ သစ်​တိုင်​ကို “လက်​ဝါး​ကပ်​တိုင်၊” “လက်​ဝါး​ကား​တိုင်” ဆို​ပြီး ဖော်​ပြထား​တဲ့​အတွက် ယေရှု​ ဟာ ကြက်​ခြေ​ခတ်​ကား​တိုင်​မှာ သေဆုံး​တယ်​လို့ လွဲ​မှား​စွာ နား​လည်​ကြ​တယ်။ တ​ကယ်​တော့ ယေရှု​ဟာ သစ်​တိုင်​ပေါ် အသတ်​ခံ​ရ​တာ​ဖြစ်​လို့ ဒီကျမ်းမှာ​ “သစ်တိုင်” ဆို​ပြီး ရိုး​ရိုး​ရှင်း​ရှင်း ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ (မဿဲ ၂၀:၁၉။ ၂၇:၃၁၊ ၃၅) “သင်း​ထောက်၊” “ဓမ္မ​အမှု​ထမ်း” ဆို​တဲ့ အသုံး​အနှုန်း​ကို “အသင်း​တော် အမှု​ထမ်း” ဆို​ပြီး ပြန်​ဆိုလိုက်​တဲ့​အတွက် အဓိပ္ပာယ်​မလွဲ​တော့​ဘဲ နား​လည်​ရ​လွယ်​ကူ​သွား​တယ်။—၁ တိမောသေ ၃:၈၊ ၁၂။
ကိုယ်​အင်္ဂါ​အစိတ်​အပိုင်း ပကတိ​ကျောက်​ကပ်​ကို ရည်​ညွှန်း​တဲ့​အခါ​မှာ “ကျောက်​ကပ်” ဆို​ပြီး ဘာ​သာ​ပြန်​တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ဆာလံ ၇:၉၊ ၂၆:၂၊ ဗျာဒိတ် ၂:၂၃ တွေ​မှာ တင်​စား​ချက်​အနေ​နဲ့ သုံး​တဲ့​အခါ​မျိုး​ကျ​တော့ စာ​ကိုယ်​မှာ “အနက်​ရှိုင်း​ဆုံး ခံစား​ချက်” ဆို​ပြီး အဓိပ္ပာယ်​ကို ပြန်​ဆို​တယ်၊ မူ​ရင်း​ကို​တော့ အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​မှာ ထည့်​ထား​တယ်။ “ဦး​ချို၊” “လည်​ပင်း​ခိုင်​မာ” စတဲ့​ စကား​လုံး​တွေ​ကို​လည်း အကြောင်း​အရာ​ပေါ် မူ​တည်​ပြီး ပြန်​ဆို​တယ်၊ မူ​ရင်း​ကို​တော့ အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​မှာ ထည့်​ထား​တယ်။ (ယောဘ ၁၆:၁၅။ တ​ရား​ဟော​ရာ ၉:၆) အသုံး​အနှုန်း​တ​ချို့​ကို​တော့ “ခက်​ဆစ်” မှာ ရှင်း​ပြထား​တယ်။
ဖတ်​ရ​လွယ်​ကူ​ခြင်း။ ထီး​သုံး​နန်း​သုံး​စကား​လုံး​တွေ​နဲ့ ပြန်​ဆို​ထား​တဲ့ မြန်​မာ​ကျမ်း​စာ​အများ​စု​ဟာ အခု​ခေတ်​လူ​တွေ​အတွက် နား​လည်​ရ​ခက်​လာ​တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ​ကျမ်း​ကို မြန်​မာ​လူမျိုး​အများ​စု နေ့​စဉ်​ပြော​ဆို​တဲ့ စကား​တွေ​နဲ့ ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ ထီး​သုံး​နန်း​သုံး​စကား​တွေ လို​အပ်​သလောက်​ပဲ သုံး​တဲ့​အတွက် နား​လည်​ရ​လွယ်​ကူ​စေ​တယ်။ ဒါ့​အပြင် ဒီ​ကျမ်း​စာ​မှာ “ကျွန်ုပ်၊” “သင်” စ​တဲ့ နာမ်​စား​တွေ​ကို နေ့​စဉ်​သုံး “ကျွန်​တော်၊” “ခင်​ဗျား” ဆိုပြီး​ ပြန်​ဆို​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် ကျမ်း​စာ​မှတ်​တမ်း​တွေ ဖတ်​တဲ့​အခါ အတိတ်​သမိုင်း​ကြောင်း​တွေလို့ ရှုမြင်​မယ့်​အစား စိတ်​ထဲ​မြင်​ယောင်​လာ​စေ​ပြီး ကိုယ်​တိုင်​ပါ​ဝင်​နေ​သလို ခံစား​ရ​စေ​တယ်။ စာ​လုံး​ပေါင်း​တ​ချို့​ကို​လည်း ဖတ်​ရ​လွယ်​အောင် ပြန်​ဆို​ထား​တယ်။ ဥပမာ၊​ “ဣသ​ရေ​လ” အစား “အစ္စရေး၊” “သိ​နာ” အစား “ဆိုင်း​နိုင်း၊”​ “အဲသ​ယော​ပိ” အစား “အီသီယိုး​ပီးယား၊” “ဥ​ဖရတ်” အစား “ယူ​ဖရေး​တီး” ဆို​ပြီး ပြန်​ဆို​တယ်။—ကမ္ဘာဦး ၃၂:၂၈။ ထွက်​မြောက်​ရာ ၁၉:၁။ တမန်​တော် ၈:၂၇။ ကမ္ဘာဦး ၂:၁၄။
ဒါ​ကြောင့် လူ​ကြီး​လူငယ်​မရွေး ဒီ​ကျမ်း​စာ​ကို ဖတ်​ရ​တာ ပျော်​မွေ့​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ကျမ်း​စာ​သား​တွေ​ကို ဆုတောင်း​ပြီး၊ အသေအချာ သုံးသပ်​ပြီး​မှ ပြောင်း​လဲ​ထား​ တာ​ဖြစ်​လို့ ကမ္ဘာ​သစ်​ဘာ​သာ​ပြန်​ကျမ်း ကော်​မတီ​ရဲ့ ကောင်း​မွန်​လှ​တဲ့​ပြန်​ဆို​ချက်​ကို အလွန်​လေး​စား​တဲ့​စိတ်​နဲ့ ပြန်​ဆို​ထား​ပါ​တယ်။
ဒီ​ကျမ်း​မှာ အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​တွေ ပါ​ဝင်​ပြီး အောက်​ပါ​အတိုင်း ခွဲ​ခြား​သတ်​မှတ်​ထား​တယ်–
“ဒါ​မှ​မဟုတ်” မူ​ရင်း​ဟီ​ဘ​ရူး၊ အာ​ရ​မိတ်၊ ဂရိ​စာ​သား​တွေရဲ့ ခြုံ​ငုံ​အဓိပ္ပာယ်​ကို ဖော်​ပြပေး​တဲ့ ပြန်​ဆို​ချက် နောက်​တစ်​မျိုး။—ကမ္ဘာဦး ၃:၁ “သတိ​အကြီး​ဆုံး​ပဲ၊” ဟီ​ဘ​ရူး ၁၀:၂၄ “ထောက်​ထား​စာ​နာ​ကြစို့၊” အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​တွေ​ကို ကြည့်​ပါ။
“. ​. ​. လည်း​ဖြစ်​နိုင်” မူ​ရင်း​စာ​သား​ရဲ့ ဖြစ်​နိုင်​ချေ​ရှိ​တဲ့ အဓိပ္ပာယ် နောက်​တစ်​မျိုး။—ကမ္ဘာဦး ၂၁:၆ “ငါ​နဲ့​အတူ ရယ်​မော​ကြ​လိမ့်​မယ်၊” ဇာ​ခ​ရိ ၁၄:၂၁ “ခါ​နန်​လူ၊” အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​တွေ​ကို ကြည့်​ပါ။
“မူ​ရင်း” ဟီ​ဘ​ရူး၊ အာ​ရ​မိတ်၊ ဂရိ​မှာ​ပါ​တဲ့ မူ​ရင်း​စာ​သား​အတိုင်း တိုက်​ရိုက်​ပြန်​ဆို​ချက်။—ကမ္ဘာဦး ၈:၂၁ “မွှေး​ကြိုင်​တဲ့၊” ထွက်​မြောက်​ရာ ၃၂:၉ “ခေါင်း​မာ​မှန်း၊” အောက်​ခြေ​မှတ်​ချက်​တွေ​ကို ကြည့်​ပါ။
အဓိပ္ပာယ်​နဲ့ နောက်​ခံ​အချက်​အလက်။ နာ​မည်​တွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ် (ကမ္ဘာဦး ၃:၁၇ “အာ​ဒံ၊” ထွက်​မြောက်​ရာ ၁၅:၂၃ “မာ​ရ”)၊ အလေး​ချိန်၊ အတိုင်း​အတာ​တွေ​နဲ့​ပတ်​သက်​တဲ့ အချက်​အလက်​များ (ကမ္ဘာဦး ၂၄:၂၂ “ရှယ်ကယ်”)၊ နာမ်​စား (နာဟုံ ၁:၁၄ “မင်း”)၊ နောက်​ဆက်​တွဲ​နဲ့ ခက်​ဆစ်​မှာ​ပါ​တဲ့ အချက်​အလက်​များ။—ကမ္ဘာဦး ၃၇:၃၅ “သင်္ချိုင်း၊” မဿဲ ၅:၂၂ “ဂေဟင်နာ။”
ကျမ်း​စာ​ရဲ့ ရှေ့​ဆုံး​အပိုင်း​မှာ​ပါ​တဲ့ “သမ္မာ​ကျမ်း​စာ​က​နေ သိ​ရှိ​နိုင်​ရာ​များ” ဆို​တဲ့ ခေါင်း​စဉ်​အောက်​မှာ ကျမ်း​စာ​အခြေ​ခံ​သွန်သင်​ချက်​တွေ​ကို ဖော်​ပြထား​တယ်။ ကျမ်း​စောင် ၆၆ စောင်​ပြီး​တဲ့​နောက် “ကျမ်း​စာ​စောင် ဇ​ယား၊” “ကျမ်း​စာ​စကား​လုံး​များ အညွှန်း၊” “ခက်​ဆစ်” ဆို​တဲ့​အပိုင်း​တွေ ပါ​တယ်။ ခက်​ဆစ်​က သတ်​သတ်​မှတ်​မှတ် ကျမ်း​စာ​အသုံး​အနှုန်း​တွေ​ကို နား​လည်​ဖို့ ထောက်​ကူ​ပေး​တယ်။ နောက်​ဆက်​တွဲ က မှာ “ကျမ်း​စာ​ဘာ​သာ​ပြန် လမ်း​ညွှန်​ချက်​များ၊” “ ဒီ​ကျမ်း​စာ​ရဲ့ ထူးခြား​ချက်​များ၊” “သမ္မာ​ကျမ်း​စာ ရ​ရှိ​လာ​ပုံ၊” “ဟီ​ဘ​ရူး​ကျမ်း​စောင်​တွေ​မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်၊” “ခ​ရစ်​ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း​စောင်​မှာ​ပါ​တဲ့ ဘု​ရား​သခင့်​နာ​မည်၊” “ဇ​ယား– ယုဒ​နိုင်​ငံ​နဲ့ အစ္စရေး​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ပရော​ဖက်​များ၊ ဘု​ရင်​များ၊” “ယေရှု​ရဲ့ မြေကြီး​အသက်​တာ အဓိ​က​ဖြစ်​ရပ်​များ” ပါ​ဝင်​တယ်။ နောက်​ဆက်​တွဲ ခ မှာ ကျမ်း​စာ​လေ့​လာ​တဲ့​အခါ အထောက်​အကူ​ပြု​တဲ့ မြေပုံ​တွေ၊ ဇ​ယား​တွေ၊ တခြား​အချက်​အလက်​တွေ ပါ​ဝင်​တယ်။
ကျမ်း​စောင်​တိုင်း​ရဲ့​အစ​မှာ မာ​တိ​ကာ​ပါ​တဲ့​အပြင် သက်​ဆိုင်​ရာ​အခန်း​ငယ်​တွေ​ကို​ပါ ဖော်​ပြထား​တဲ့​အတွက် ကျမ်း​စောင်​တစ်​ခု​လုံး​ကို ခြုံ​ငုံ​သိ​ရှိ​စေ​တယ်။ စာ​မျက်​နှာ​တိုင်း​ရဲ့ အလယ်​ကော်​လံ​မှာ သက်​ဆိုင်​ရာ ကျမ်း​ချက်​တွေ​ကို ညွှန်​ပြတဲ့ ကျမ်း​ညွှန်း​တွေ ပါ​တယ်။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ဒီကျမ်းစာရဲ့ထူးခြားချက်များ
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်တည်းဖြတ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းရဲ့ ထူးခြားချက်များ
nwt စာ. ၂၄၉၀-၂၄၉၃